Fiomanana amin'ny ririnina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fiomanana amin'ny ririnina
Ny fikarakarana ny famokarana mandokora
Raha te hahagaga ny havanao sy ny vahiny ianao amin'ny siramamy izay misy tsiro tsy mahazatra ary manana toetra mahasoa maro, dia ny mandro mandchuriana no tsara indrindra ho anao. Lavitra ny olon-drehetra dia maheno momba ny zava-maniry toy izany, na dia misy karazan-tsakafo sy vitaminina tsy manam-paharoa aza izy io, izay mahatonga azy io tsy vitan'ny dessert mahasalama, fa karazana fanafody ihany koa.
Ahoana no hamonjena ny katsaka amin'ny ririnina: mangatsiaka
Ny katsaka dia sakafo mahavelona amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy, saingy ny vanim-potoan'ny fividianana vao haingana amin'ity vokatra ity dia fohy - indrisy, ny tadin-kiran'ny tanora dia tsy afaka nitahiry nandritra ny fotoana ela. Nefa afaka manitatra ny vanim-potoan'ny fividianana katsaka hatramin'ny fahavaratra manaraka, raha fantatrao ny fomba famenoana ny katsaka amin'ny ririnina ao anaty voamadinika sy eo amin'ny cob.
Mofomamy ho an'ny ririnina
Herisetra isan-kerinandro dia gaga amin'ny fanontaniana - inona no hanina amin'ny sakafo antoandro na sakafo hariva. Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fotoana, dia misy fepetra sasantsasany fanampiny, satria zava-dehibe ny hanatsarana haingana ny sakafo, nefa mahasalama, mahafa-po ary mahasalama. Ny tena marina dia ny fiomanana isan-karazany, izay ahafahanao haingana haingon-tsakafo ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Mangatsiatsiaka ny ririnina amin'ny ririnina any an-trano
Ny fampakarana no iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana manangom-bokatra amin'ny ririnina, izay ahafahanao miaro ny voka-dratsiny ho an'ny ankamaroan'ny vitamina mandritra ny vanim-potoanan'ny vitaminina manontolo. Ankoatr'izany, amin'ny famerenana izany, dia azo atao ny mamonjy toerana ao anaty efitrano, mametraka fiarovana mavesatra any. Ankoatra izany, dia hamonjy fotoana, ezaka ary vola ianao, satria mora sy tsotra ny dingana, ary farafahakeliny ny vidin'ny legioma mandritra ny ririnina.
Ny fomba hanosehana harona ao an-trano
Blue - ho an'ny maro, io no iray amin'ireo legioma be dia be indrindra amin'ny vanin-taona mafana. Ny Southerners dia tsy mieritreritra ny sakafo fanatanjahantena tsy misy Saute avy amin'ireo atody sy ireo sakafo matsiro hafa. Mivily haingana ny fahavaratra, ary voatahiry ela ny voninkazo! Azonao atao anefa ny miezaka manomana an'io legioma tsara tarehy io ho an'ny hoavy ary mankafy ny lovia manga amin'ny vanim-potoana mangatsiaka.
Ny fiarovana, ny fanasitranana, ny fampangatsiahana ary ny fomba hafa amin'ny fijinjana kiraro mamy ho an'ny ririnina
Fotoam-pialantsasatra ny fotoam-pialan-tsasatra: misy karazan-tsakafo sy voankazo goavana eo amin'ny zaridaina sy eo amin'ny talantalana ao amin'ny fivarotana. Ho an'ny olona maro, ny volana Jona dia ny volana ankafiziny, ary izany dia satria mandritra io vanim-potoana io, ny fijinjana tsaramaso dia mihinana amin'ireo hazo. Ary toa hita fa manana fotoana ampy hihinanana any amin'ny helo ianao, fa ny iray ihany, miaraka amin'ny fanombohan'ny andro mangatsiaka, dia mahatsiaro io voankazo matavy io miaraka amin'ny alahelo.
Fomba hisakanana ny boaty any an-trano
Mandritra ny vanim-potoana amin'ny fiomanana amin'ny ririnina, ny fanontaniana momba ny fanamafisana ny bakteria dia manjavozavo indrindra, satria ny fahadiovana sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ireo sakafo izay hitahirizana ny fitehirizana dia ny fanalahidin'ny tsirony tsara, aroma ary fiarovana amin'ny fahasalamana. Inona no atao hoe fanamafisana ny bakteria? Mahagaga fa, nefa maro ny mpinamana tsy miraharaha ny fizotran'ny bakteria miafina, ary zava-poana izany.
Raha tianao ny fimailo, fa tsy manamboatra velitra azy ireo ianao, ity lahatsoratra ity dia ho anao! Ao anatin'izany dia hizara enina enina miaraka aminao ianareo, nefa miaraka amin'ny fomba mahavoky ny tsiron-tsakafo feno tsiro ihany koa. Ankoatra izany dia hampianatra anao ny sasantsasany amin'ny fanomanana ity zava-pisotro ity. Ary aza adino koa ny hilaza aminao ny tombotsoany. Ny zavatra ilaina dia ny plum compote Manan-tany ampy tsara tsy ho an'ny voankazo, fa koa ho an'ny compote, mivoaka avy amin'izy ireo.
Ahoana no fanaovana vinaingitra apetraka ao an-trano
Ny vinaingitra avy amina Apida dia eo amin'ny lisitry ny vokatra voajanahary izay misy ny toetra mahasoa. Ny olona dia nahafantatra azy ireo nandritra ny fahagolan-tany. Ary nohazavaina tamin'ny antsipirihany avy amin'ny dokotera avy any Amerika D. Jarvis tamin'ny famoahana ny tantely sy ny vokatra voajanahary hafa, izay nivoaka tamin'ny 1981. Tao amin'ny asany, nanangona ireo karazan-tsakafo mahomby rehetra izy amin'ny fampiasana vinaingitra apetraka amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, ary manamarina fa ny fampiasana azy dia manampy amin'ny fisorohana sy fitsaboana aretina maro.
Manompoa amin'ny abrisika
Ny Aprikao dia iray amin'ireo vokatra tsara indrindra sy mamy indrindra ary manana ny toetrany manokana amin'ny fiomanana amin'ny ririnina. Ankoatra ny jam, ny jam sy ny jam, ireo mpanolo-tena mendrika dia voaomana amin'izany, ireo fomba mahazatra izay hodinihintsika ankehitriny. Inona no mahasambatra ny rongony Aprikao misy singa mahasoa sy vitamina.
Ny fomba fanaovana fanomanana ny tsilo (miaraka amin'ny tsy misy vato) sy ny tombontsoa azony
Maro no mihevitra fa ny tsilo sy ny tongolo dia anarana hafa ho an'ny voay. Raha ny marina, dia somary ratsy ihany ny zava-drehetra. Ny fihodinana dia tsimokaretina marefo, ary ny tsilo dia fiangonan'ny trano fonenana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpandoko dia voajanahary amin'ny tsilo sy voankazo voajanahary, izay lasa lehibe kokoa sy mamy kokoa noho ny tsilo, fa kely sy mampihetsim-po kokoa.
Fanondrahana voninkazo tsara ho an'ny ririnina
Ny natiora dia manome sakafo ara-pahasalamana sy matsiro. Noho izany, any am-piandohan'ny fararano mafana na "manga" dia mihinana eo am-pandriana, araka ny niantsoana azy ireo olon-tsotra. Na dia loko volomparasy kokoa aza io legioma io noho ny lokony manga, ny karazana sasany dia fotsy. Io legioma io dia tena mahasoa sy mahasalama, noho izany dia manandrana manomana izany amin'ny ririnina ireo mpitaiza, amin'izay mba hahafahany mamela ny tenany sy ny fianakaviany amin'ny vokatra mahafinaritra.
Kaviar homemade homemade: Recipe duplicate miaraka amin'ny sary
"Kaviaar ampitan-dranomasina, atody!" - Noho izany dia nanolotra tamim-pireharehana an'ity lovia mahavariana mahatalanjona ity noho ny endriky ny Komitin'ny Sovietika L. Gaidai "Niovaova i Ivan Vasilyevich". Mazava ho azy, ny vokatra toy izany dia tsy azo ampitahaina amin'ny mofomamy mena na mainty na amin'ny vidiny na amin'ny toetra mahasoa, fa mbola mahafinaritra be izany, fa tsy ny vanim-potoana fotsiny, satria ny kaviar manga dia mety ho voaomana amin'ny endrika ririnina amin'ny ririnina tsy misy olana manokana.
Ny fomba hanamboarana ranomandry amin'ny ririnina
Ny Autumn dia fotoana manan-danja isan-taona ho an'ny mpivady tsirairay, satria fotoana izao hanomanana ny fiarovana amin'ny ririnina. Ary kely raha ampitahaina amin'ny dite mafana miaraka amin'ny menaka amin'ny alin'ny ririnina mangatsiaka. Plum - safidy tsara, satria mahasalama ny siramamy avy aminy ary tsy mahasalama ny mahandro. Momba ny tombontsoa avy amin'ny plum Plum (lat.
Ahoana no hanangom-boankazo amin'ny ririnina: 3 fomba tsara indrindra
Ny fonosaina voaangona dia mahaliana sy mahavariana. Misy voankazo mamy sy manitra be dia be mahita ny mpankafy azy ireo. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo fomba fikarakarana ny fanomanana an'io fiarovana io. Diniho ny sasany amin'izy ireo. Fantaro hoe inona no tombontsoa azon'ny vehivavy. Ny tsiron-tsakafo tsara kokoa amin'ny fisafidianana Raha manangom-bary dia tsara ny misafidy karazana varim-bazaha "Hungarian", "Renklod" na karazana hafa rehetra miaraka amin'ny henam-barotra.
Ahoana ny fomba hanamboaran-dranomamy ranomasina: dingana tsotsotra amin'ny sary
Ny tora-pasika dia iray amin'ireo zavamaniry tena ilaina ao Eoropa sy Azia. Amin'izay fotoana izay ihany, ny tombony azo antoka tsy azo antoka dia tokony ho ny vokatra avo dia avo indrindra: amin'ny taona tsara, ka hatramin'ny 15 kg voankazo azo alaina avy amin'ny hazo iray, na mihoatra! Mazava fa ny fihinanana be dia be betsaka, na dia manitra aza izy ireo, dia tena olana.
Ahoana ny fomba fitehirizana katsaka any an-trano
Tao amin'ny trano fivarotana fivarotana dia nivarotra varimbazaha tao anaty vilany. Matetika izy io no mividy azy io, satria izy io dia misy karazana salady sy sakafo hafa. Na izany aza dia tsy misy afa-tsy ny ao an-trano ihany no afaka manao izany ary tsy afaka manondraka afa-tsy ny masomboly fotsiny, fa ny cobs rehetra. Nahoana no voankazo varimbazaha rehefa voamaina ny voankazo voatsabo dia tsy mahavaky ny toetrany ary ny sakafo avy ao aminy dia mahasoa noho ny toetra sasany: misy kalôro vitsy (58 kcal isaky ny 100 grama) ary mety hahasoa ny olona maniry ny ho very azy; Misy vitaminina ny vondrona B, ascorbic acid, vitamin A ary beta-carotene, niacin; Misy macro sy microelements - natiora, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, selenium, manganese, varahina, vy ary zina; Ny voankazo voarakitra ao amin'ny katsaka dia manana antioxidant sy oncoprotective properties; Misy asidra amino, anisan'izany ny tena ilaina; dia tsy miteraka flatulence, tsy toy ny mahandro; Tsy dia misy heriny mihitsy izany; tsy misy gluten.
Ahoana no hanamboarana apricot jam: 3 fomba tsara indrindra
Amin'ny fahatongavan'ny fararano, ny vatantsika dia manomboka tsy ampy vitaminina sy mineraly. Efa tapitra ny vanim-potoana voankazo sy voankazo, ary tsy ho ela ilay vaovao. Noho izany, mba ahafahan'ny vatantsika mandray rongony amin'ny sakafo mandritra ny herintaona, dia ilaina ny mijinja vokatra amin'ny ririnina. Ny fofom-bika mahafinaritra sy ny fitsaboana tsara ao amin'ny faritra misy antsika hatrizay hatrizay dia efa nanaovana kiraro.
Top 10 fomba fanamboarana tavoahangy vita amin'ny sela
Tranom-boin-kesika dia tsiranoka miorina amin'ny alkaola misy alikaola. Misy karazana fomba fikarakarana kiriodana maro, saingy androany dia hijery ny top 10 isika, miaraka amin'ny filazalazana ny isan'ireo entin-kakazo sy ny tari-dàlana isan-kerinandro. Ny tincture mahasoa momba ny kirizy Ny fampiasana ny tincture amin'ny serizy dia tapa-kevitra izany.
Autoclave amin'ny fanodinana sakafo
Ny autoklaves dia efa nampiasaina hatry ny ela: fanafody, cosmetology, ary indostria isan-karazany, fa ny ankamaroany dia mahazatra ny fitaovana ahafahana mitahiry trano. Noho ny hatsaran'ny vokatra namboarina ao aminy dia tsy mahagaga izany. Maro no liana amin'ny fividianana na famoronana rafitra mitovy amin'ny fampiasana trano, ka amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny saram-pividianana novidiana sy natao an-trano.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fiomanana amin'ny ririnina